Unlocker | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Unlocker. Show all posts
ဖုန်းကို lock ချပြီး မကြာခန မေ့တတ် သူများ အတွက် SMS Bypass v1.3.apk
ဒီပိုစ့်လေးကို အားလုံး အတွက် တင်ပေး ချင်နေတာ ကြာပါပြီ မတင်ပေးဖြစ်ဘူး ဟိုတစ်နေ့ကလည်း
ဘော်ဒါ တစ်ယောက်ရဲ့ တက်ဘဘက် Lock ဖြေ မရတော့လို့ ဆိုပြီး အလောတကြီးရောက် လာပြန်
တယ်၊ ဒီနေ့ သတိရ တာနဲ့ အားလုံးလည်း အဆင်ပြေ သွားအောင် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးက အရမ်း နာမည်ကြီးတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ မိမိဖုန်းမှာ Lock Screen ချပြီး မကြာခန မေ့
တတ်တဲ့ သူတွေ အတွက် အထူး ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ။
ဒီကောင်လေးက မိမိဖုန်းမှာ Lock ချထားတာလေး မေ့နေတဲ့ အခါ Lock Password လေးကို ဖျက်ပစ်
သိတယ်မလား Lock လေး ဖွင့်မရတော့ နောက်ဆုံး Factory reset ချလိုက်ရတဲ့ အထိပါပဲ Factory
reset လည်း ချလိုက်ရော မိမိရှိတဲ့ data အားလုံး ဆုံးရှုံး လိုက်ရ တာပါပဲ။
အခုကျနော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ SMS Bypass လေးကတော့ Gmail account လည်း ဝင်ထားစရာမ
ဒါပေမယ့် ဒီဆော့ဝဲလေး အတွက် မိမိဖုန်းဟာ Root Access ရှိထားပြီးသား ဖြစ်နေရပါမယ်။
၁။ အသုံးပြု နည်းကတော့ ဒေါင်းလော့ ရလာတဲ့ Apk လေးကို ဖုန်းမှာ အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ၊
ပြီးရင် service ကို On ပေးပါ။
၂။ Change preset keyword ကိုနှိပ်ပါ Old secret code မှာ ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ် စသုံးတဲ့ users
အတွက်ကတော့ ဘာမှဖြည့်စရာ မလိုပါဘူးတဲ့ ဒါမှ မဟုတ် လည်း မိမိကြိုက်ရာ ဂဏန်း ၄ လုံး
ဖြည့် လိုက်ပါ New Sercret code နဲ့ Confirm new secret code မှာတော့ မိမိ အသုံးပြု ချင်တဲ့
Code ၄ လုံးကို ထည့်ပေး လိုက်ပါ...။
၃။ လွယ်ပါတယ် ဥပမာ မိမိ မှတ်မိ လွယ်မယ့် ဂဏန်း အက္ခရာ လေးလုံး 1234 စသည်ဖြင့်
ရိုက်ထည့်ပေး လိုက်ပြီး အားလုံး ပြီးရင်တော့ Save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၄။ အပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပြီးသွားရင်တော့ အခြားဖုန်း တလုံးကနေ စောနက မိမိ SMS
Bypass ဆော့ဝဲနဲ့ ပြု လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းကို Message တစ်ခုလောက် ပို့ကြည့်လိုက်ပါ။
၅။ Message ထဲမှာ ဘာထည့် ရိုက်ပေးရမလဲ ဆိုတော့ ခုနက ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ Code ကို မှန်
အောင်ရိုက်ပါ ဥပမာ ” 1234 reset ” ဆိုပြီး ထည့်ရိုက်ပြီး Message ပို့လိုက်ပါ။ အဲဒါဆို Lock
ချမိနေတဲ့ ဖုန်းလေး Reboot ကျသွား ပါလိမ့်မယ်။ ပြန်တက် လာရင်တော့ အဲဒီဖုန်းလေးဟာ
သူ့အလိုလို Lock ကျနေလည်း ပြေပြီး ပုံမှန် ဖုန်းတစ်လုံး အတိုင်း Data တွေလည်း မပျက်စီးပဲ
အသုံးလိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေကတော့ စမ်းသပ် အသုံးပြု နိုင်ကြပါပြီ အဆင်ပြေမှု မပြေမှုကတော့
Size 685 KB ပဲရှိပါတယ်။ Android Version 2.3 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
▼ my.pcloud.com ▼ OR ▼ userscloud.com ▼ OR ▼ usersfiles.com ▼
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Unlocker
ကိုယ် အမြဲ ချိ်တ်ဆက် နေတဲ့ Device တွေကို အသုံးပြုပြီး Android Lock Screen ကို ဖွင့်ပေးမယ့် Smart Unlock for Android
Android အတွက် ထွက်ရှိ ထားတဲ့ application တွေ ထဲမှာ အခု ထွက်ရှိ လာတဲ့ Smart Unlock လို့
ခေါ်တဲ့ app လေး ဟာလည်း ထူးခြား ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android ဖုန်း တွေကို Screen Lock ချထား တဲ့ အချိန်မှာ Password , Pin , Pattern
စတဲ့ Lock Security တွေနဲ့ Lock ချထားလို့ ရပါတယ်။ အခု Smart Unlock ဆော့ဝဲလေးရဲ့အလုပ်
လုပ် ပုံကတော့ ကိုယ် ချိတ်ဆက် နေကျ Wifi ကွန်ရက် , Bluetooth Device စတာ တွေကို ဒီဆော့
၀ဲက မှတ်သား ထားပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ် Password, Pin, Pattern Lock တွေ မရိုက်လိုတဲ့ အခါ မေ့
နေတဲ့ အခါ မျိုးမှာ ကိုယ် ချိတ်ဆက် နေကျ Wifi ကွန်ရက် , Bluetooth Device စတာ တွေနဲ့ ချိတ်
ဆက်ပေး လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းကို Lock Screen ကို ဖွင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးကို အသုံးပြုဖို့ ဖုန်းမှာ Android Version 4.0 နှင့် အထက် ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်အမြဲ
ချိ်တ်ဆက် နေတဲ့ Device တွေ ကို အသုံးပြု ပြီး Android Lock Screen ကို ဖွင့်ပေး မယ့် Smart
Unlock for Android ကို အောက်က link ကနေ ရယူနိုင် ပါတယ်။
Bat Six.rar ( Coolpad Network Unlock.apk, DingdaungRoot.apk & Coolpad USB driver for PC )
RAR ဇစ်ဖိုင်အား အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါခင်ဗျာ။
▼ Download the rar file from here ▼
From : Thiha Htike (Mobile နည်းပညာ) by Thiha Htike
မျှဝေသူ Ming Y Rau မှာ Saturday, November 01, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Phone Application, Root, Unlocker, USB-Driver
အခု ပြောပြ မှာက တော့ Window password အားလုံး နီးပါး ကို ကျော်လို့ ရမယ့် နည်းလမ်း လေးပါ ကြိုက်တဲ့ Windows OS ရဲ့ login
password တွေကို ကျော်ဖြတ်နည်း အ ကြောင်း လေး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျော် ဖြတ် နည်း ဆိုတော့ မူလ ရှိနေ ပြီသား password ကို ချိုးလည်း မချိုး ဖျက် လည်း မဖျက် ဘူး ၊ပြောင်း လည်း မပြောင်း ဘူး နဂိုရှိ
နေတဲ့ အတိုင်းပဲ ထားမှာပါ။ ကဲ စကြ ရအောင် !!
ဒီနည်းကို သုံးပြီး အောက်မှာ ပြထားတဲ့ OS တွေရဲ့ Login password တွေ ကို ကျော်ဖြတ် နိုင် ပါတယ်။
Step #1 kon-boot 1.1 ကို အောက်က လင့်မှာ Download လုပ် ယူပါ။
Step #2 သင့်ရဲ့ USB stick ကို Computer USB port မှာ တပ် လိုက်ပါ။
Step #3 ပြီးရင် FAT 32 file system နှင့် Format လုပ်ပါ။
Step #4 Download လုပ် ထားတဲ့ file ကို ဖြည်ပါ။ ပြီးရင် "KonBoot V1.1 32 & 64 bit" ဆိုတဲ့ folder ကို ဖွင့်ပါ။
step #6 command prompt တစ်ခု တတ်လာ ပါလိမ့် မယ်။ ၄င်း command prompt ထဲမှာ သင့်ရဲ့ USB drive letter ကို မေးနေ လိမ့်မယ်။
အပေါ်မှာ ပြ ထားတဲ့ screenshot ထဲမှာ ကျွှန်တော်ရဲ့ USB drive letter ဟာ H: ဖြစ်ပါတယ်။ USB drive letter ထည့် ပြီး သွားရင် "Enter" ကိုနှိပ်ပါ။ USB ထဲကို install လုပ်လို့ ပြီးသွား ပါပြီ။
Step #7 ကဲ စမ်း ကြည့် ရ အောင် PC ကို Restart လုပ်ပါ။ (password မရှိ သူများ passsword ပေးပြီး စမ်း ကြည့် နိုင် ပါ တယ်)။
F2 နှိပ် BIOS ထဲဝင်ပြီး First Boot Device မှာ USB ကို ထား ဒါမှ မဟုတ် F12 ကိုနှိပ် USB ကို ရွေးပြီး USB ကနေ BOOT တက်ပါ။
From: ဘလော့ခရီးသည် by Minoke kar
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 04, 2014 1 comment:
ကဏ္ဍ Password, Unlocker
HTC ဖုန်းများ Bootloader Unlock လုပ်နည်း
Bootloader unlock မလုပ် ခင် သိထား ရမှာ က Factory Data reset ဖြစ် ပါလိမ့်မယ် ဖုန်း ထဲက Data အားလုံး ကို SD card ကို ပို့ထားပါ။ Bootloader unlock လုပ် လိုက်ရင် HTC က ပေးတဲ့ Warranty ပျက်ပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ လုပ်ရင် ကိုယ်က auto သဘောတူ ပါပြီ။
၁။ www.htcdev.com မှာ Register လုပ်ပါ။
Email လိပ်စာ ကို Unlock_code.bin ဖိုင် ပို့ မှာပါ အဲဒါကြောင့် Email လိပ်စာ သေသေ ချာချာ ရေးပေးပါ။
၂။ www.htcdev.com/bootloader ကို ၀င်ပါ။
ကိုယ်နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ ဖုန်း အမျိုး အစားကို ရွေးပါ။ မရှိရင် all other supported models ကို ရွေးပါ။ Unlock Bootloader ကို နိပ်ပါ။
၃။ HTC က သတိပေး စာတမ်းတွေ ပေးပါ လိမ့်မယ် Yes နိပ်ပါ။ အားလုံးကို အမှန်ခြစ် - Next တွေနဲ့ လုပ်ပါ။
ကျွန်တော် all other supported models လုပ် ခဲ့တဲ့ အတွက် အားလုံးက တူရင် တူပါ လိမ့်မယ်။ တစ်ကယ် လို့များ မတူ ခဲ့ရင် HTC မူရင်း Unlocking Bootloader Instructions လုပ်နည်းနဲ့ ကျွန်တော် လုပ်နည်းနဲ့ စစ်ပြီး လုပ် သွားရင် ပိုကောင်း ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို မကပဲ Power ခလုပ် ကို ဖိထားပြီး restart ကို ရွေး လိုက်ပါ။ Restarting ပြုလုပ် နေချိန် အတွင်း volume down ကို ဖိထား ခြင်းဖြင့် Bootloader Mode ကို တစ်ခါတည်း ရောက် သွားပါမည်။
Volume Down နဲ့ Power ဖိထား ခြင်းဖြင့် Bootloader mode ဖြင့် စတင် ၀င် ရောက် ပါ။
Volume buttons ကို အသုံး ပြုပြီး အပေါ် အောက် သုံးပါ။ Fastboot ကို Highlight ဖြစ်အောင် ပြု လုပ်ပြီး Power button ကို နိပ် ပါ။
ဖုန်း နှင့် ကွန်ပျူတာ ကို Usb ကြိုးဖြင့် ချိတ်ပါ။
ကွန်ပျူတာ မှာ new folder တစ်ခု ဆောက်ပါ။ (ဥပမာ အနေနဲ့ : C:Android ) ဖိုင် ၃ ဖိုင် ကို new folder ထည့်ထား ဖို့ လိုအပ် ပါလိမ့် မယ်။ ဖိုင်တွေက
adb.exe, AdbWinApi.dll, fastboot.exe ဖိုင် သုံးဖိုင် ကို SDK Manager.exe နိပ်ပြီး Download ဆွဲ ခိုင်း တာပါ။
android-sdk_windows.zip မှာ SDK manager.exe ပါ ပါတယ်။ ဖိုင် Size 32.2 MB (33,803,391 bytes) လောက် ရှိ ပါတယ်။
To find these files : အဆင့် (a) (b) (c) ခွဲ ထား ပါတယ်။
အဲဒီ အတိုင်း လုပ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖိုင် ၃ ဖိုင် လောက်နဲ့ ဒီလောက်ကြီး Download ဆွဲ မနေ တော့ ပါဘူး။
Download ဖိုင် သုံးဖိုင် ကို zip နဲ့ ချုပ် ထား ပါတယ်။ zip ဖြည့် ပြီး C:Android သို့ ပို့ ပါ။
command prompt ကို ဖွင့်ပါ။ ( Start > Run > Type CMD )
unzip လုပ်ပြီး ကိုယ် သတ်မှတ် ထားသော Floder မှာ ထား ထားပါ။ (ဥပမာ အနေနဲ့ c:Android လို့ သတ်မှတ် ပါတယ် နောက် ပြီး Command Prompt မှာ cd c:Android လို့ ရိုက် လိုက်ပါ)
အဆင့်(၅) က ဖိုင် ၃ ဖိုင်တွေ ကို c:Android မှာ ထား Command Prompt (CMD) မှာ cd c:Android လို့ ရိုက် ပါ။
CMD မှာ fastboot oem get_identifier_token လို့ ရိုက် ပါ။
အဆင့် ( ၉ )
TOKEN COPY ကို သေသေ ချာချာ ကူး ပေးပါ။
Token တွေ ပေါ်လာ ပါပြီ။ ပေါ် လာတဲ့ Token တွေကို <<<< Identifier Token Start >>>> မှ စပြီး
<<<<< Identifier Token End >>>>> အဆုံး ထိ ရွေးပြီး Right Click > Mark > highlight the block of text > Right click to copy နိပ်ပြီး (အဆင့် ၁၀ သို့ …….)
အဆင့် ( ၁၀ )
My Device Identifier Token: ဆိုတဲ့ နေရာ မှာ Past လုပ် ပါ Submit နိပ်ပြီး Email က unlock code binary file ကို လက်ခံ ထားပါ။ (Anti-virus သတ်တဲ့ Software တွေ.ခဏတော့ ပိတ်ထား ပေးပါ)
အဆင့် ( ၁၁ )
Email က ရလာတဲ့ Unlock_code.bin ကို C:Android ကို ပို့ ပါ။
အဆင့် ( ၁၂ )
CMD မှာ fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin လို့ ရိုက် ပါ။
အဆင့် ( ၁၃ )
ဖုန်းမှာ disclaimer ပေါ် လာ တာကို ကြည့်ပါ။ Volume ခလုတ် ဖြင့် Yes ကို ရွေးပါ။ ကိုယ့် ဖုန်း ထဲမှာ Data တွေ factory default settings
ဖြစ် လိမ့်မယ် ပြီးရင် Bootloader Mode မှာ Unlock လို့ ပေါ်ရင် Bootloader Unlock လုပ်တာ ပြီးဆုံး ပါပြီ။
အဆင့်( ၁၄ )
Bootloader ကို Lock ပြန် လုပ် လိုလျှင် အဆင့် ( ၁၂ ) က CMD မှာ fastboot oem lock ရိုက် ပြီး Re-Lock ပြန် လုပ်လို့ ရပါတယ်။
BOOTLOADER UNLOCK လုပ်တာ ပြီးဆုံး သွားပါ ပြီ။
ပို့စ် ရေးသားသူ- Win Htut Aung
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, July 30, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, HTC, Phone Application, Unlocker, ဖုန်းနည်းပညာ
ကဲ... အခု ပာာက ကျွန်တော် စုစည်းထားတဲ့ Nework Unlock ဖိုင်တွေပါ သက်ဆိုင်သူ များကို credit ပေး
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, July 09, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Huawei, Phone Application, Unlocker
sony သမားတွေ အတွက် bootloader unlock အလွယ် တစ်ကူ လုပ်မယ်
Sony phone သမားတွေ root ဖောက်တဲ့ နေရာမှာ bootloader unlock အလွယ် တစ်ကူ လုပ်လို့
ရပါပြီ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကို မိမိတို့ pc မှာ install လုပ်ပြီး unlock လုပ်ချင်တဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းနှင့် ချိတ်
ဆက်ပြီး unlock လုပ်လို့ အလွယ်တစ်ကူ ရပါပြီ။
sony သမားတိုင်းနှင့် ဆိုင် လက်ဆွဲ ပေါ့ဗျာ သူ့ကို အသုံး ပြုမယ် ဆိုရင်တော့ အင်တာနက် ကွန်နက်
ရှင် တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ အသုံးပြုမယ် ဆို ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ် ယူလိုက်ပါ။
Ref : smart ghost
From: ဝင်းကမ္ဘာကျော် by sai thu
ကဏ္ဍ Phone Application, Sony, Unlocker
Samsung Android Devices တွေအတွက် Pattern Lock, Password, Gmail စတာတွေကို Root မလို
Debug On မလို Data တွေ ဆုံးရှုံး စရာမလိုပဲ အလွယ်တကူဖြုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ Tool လေးပါ...။
Android Version 2.xx ကနေ 4.xx ထိ အလုပ်လုပ်ပါတယ်..။
တကယ်လို့ ဒီ Tool လေးကို ကွန်ပျူတာမှာ Run မရဖြစ်နေရင် စက်မှာတင်ထားတဲ့ Antivirus ကို ခဏပိတ်
ပေးပြီးမှ Run ပါ။
လိုအပ်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, December 30, 2013 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Tools, Unlocker
Rar password unlocker (for PC )
Rar ဖိုင်တွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ အသုံပြုတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကောင်း လေးပါဗျာ။
ဒီကောင်လေးက ကူညီ ပါလိမ့်မယ်နော်...။
rar ဖိုင်များ password မသိပါက ဒီဆော့ဝဲလေးကို အသုံးပြုပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်။
Full version ဖြစ်အောင် လုပ်ပေး ထားပါတယ်။ လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
Passwordကတော့ thetpaing ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, October 28, 2013 No comments: